गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बुद्ध पूर्णिमादेखि सञ्चालनमा आउने - Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बुद्ध पूर्णिमादेखि सञ्चालनमा आउने
सबै उपकरण आइसकेको र जडानको काम मात्र बाँकी रहेकाले अब भौतिक प्रगति स्वतः बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ । धावनमार्गका बत्ती तथा सञ्चार उपकरण पुसभित्र आइपुग्ने र त्यसको एकदेखि डेढ महिनाभित्र जडान पूरा हुने आयोजनाले जनाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण पौडेलले लेखेका छन् ।
८२ वर्षको उमेरमा सम्बन्ध विच्छेद ! आखिर किन यस्तो दिन आयो त
होटलमा भाँडा मा*झ्ने दिनेश धनी एकल महिलालाइ ठ*गेरै अर्ब*पति ! निसानामा यसरी पार्थे एकल र धनाढ्य महिला !
अब कर्मचारी र म्यानपावर व्यवसायीको भेट हुँदैनः श्रममन्त्री
प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच भिडियो वार्ता ! सिमा बिवाद बारे यस्तो निर्णय